संघीय प्रहरी इकाई वाग्मतीका थप ५ जनामा कोरोना संक्रमण- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
संघीय प्रहरी इकाई वाग्मतीका थप ५ जनामा कोरोना संक्रमण
श्रावण २४, २०७७ नगेन्द्र अधिकारी
काभ्रे — संघीय प्रहरी इकाई वाग्मतीका थप ५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । यसअघि संक्रमित दुई जनाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरी पीसीआर परीक्षण गर्दा थप पाँच जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. नरेन्द्रकुमार झाले जानकारी दिए ।
यसअघि इकाईका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उत्तमराज जोशीका चालक र अर्का एक महिला महिला कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । शिर मेमोरियल अस्पतालको आइसोलेसनमा कार्यरत एक जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
प्रकाशित : श्रावण २४, २०७७ १२:४१
श्रावण २४, २०७७ प्रकाश बराल
बागलुङ — धौलागिरी अञ्चल अस्पतालको ‘सी’ ब्लकको निर्माणका लागि आएका १३ जना मजदुरमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
एक साताअघि महोत्तरीबाट आएका उनीहरु बागलुङ नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए । लामो यात्रा गरेको र सीमा क्षेत्रबाट आएको भन्दै नगरपालिकाले क्वारेन्टाइनमा राखेको थियो । पोखरामा गरिएको परीक्षणमा शनिबार बिहान उनीहरुलाई संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. शैलेन्द्र पोखरेलले बताए ।
कामका लागि १७ मजदुर आएका थिए । साउन १८ गते उनीहरुमध्ये एक जनाको मात्रै पीसीआर गरिएको थियो । ती युवामा संक्रमण देखिएपछि सबै जनाको स्वाब परीक्षण गरिएकोमा १३ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो । उनीहरु २२ वर्षदेखि ३५ वर्षसम्मका छन् ।
लकडाउनका कारण रोकिएको भवन निर्माणका लागि ठेकेदारले मजदुर झिकाएका थिए । संक्रमण पुष्टि भएका सबैलाई आइसोलेसन लैजाने तयारी छ ।
प्रकाशित : श्रावण २४, २०७७ १२:२७
मकवानपुरमा ट्रकको ठक्करबाट ट्याक्टर चालकको मृत्यु
चितवनमा फेरि बाघले मान्छे मार्‍यो
खोलाले बगाएर दम्पतीको मृत्यु